Wararkii ugu danbeeyay shirarka Garoowe uga socda Dowlada Federaalka iyo maamulka Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararkii ugu danbeeyay shirarka Garoowe uga socda Dowlada Federaalka iyo maamulka Puntland
31st March 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Cumar Cabdirashiid Cali ayaa wali ku guda jira dadaalada uu maamulka Puntland uga dhaadhicinaayo aqbalaada 4.5.
Ra’isul wasaare Cumar ayaa maanta kulamo kala duwan la qaatay Madaxweynaha Puntland, Odayaasha iyo Danjiraha Turkiga u fashiya Somalia oo maanta ku biiray wada hadalka Dowlada kala dhexeeya Puntland.
Ra’isul wasaare cumar waxa uu sheegay in marnaba uusan ka daali doonin in Puntland uu kala hadlo wixii quseeya aayaha dalka, waxa uuna sheegay inuu aaminsan yahay in shirarka socda ay guul ka gaari doonaan.
Ra’isul wasaaraha waxa uu sidoo kale sheegay in Juhdi badan uu galin doono sida lagu qancin lahaa Puntland islamarkaana uu dhabar adeeg u muujin doono caqabadaha taagan.
Ra’iisal Wasaaraha wuxuu isu deyay in C/weli Gaas uu ka dhaadhiciyo in Puntland taageerto nidaamka awood qaybsiga beelaha 4.5 lagu saleeyo doorashada guud ee sanadkan ka dhaceysa dalka, taasoo uu si wayn kaga horyimid Madaxweyne Gaas.
Danjire Olgen Baker, ayaa isna juhdi ku bixinaayo, sidii uu isugu soo dhawayn lahaa Ra’iisal wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo Madaxweynaha Puntland, oo weli isu khilaafsan kulamadii maalmahaanba kaga soconaayay Magaalada Garoowe.
Waxaa adag in waxbadan laga ogaado Siyaasadaha iska soo horjeeda ee ka taagan magaalada Garoowe, Hayeeshee Dowladu waxa ay ku adeegeysaa inay guul ka gaari doonto arrinta taagan.
Dagabageed: ” Waa Looga Maarmaa Shirka Odayaasha ka soo horjeeda”.